Nofinofy mpanamboatra posy "Rosesy sy solila" - Mili Mili
Home > Nofy nofinofy tanana "Rosesy sy solila"
Nofy nofinofy tanana "Rosesy sy solila"
Nofinofy nofinofy "Rosesy sy tantely"
Ny haingon-trano nofinofin'i Moimili tany am-boalohany "Rosesy sy solila" dia haingo miavaka sy vita amin'ny tanana. Ny tablecl mint dia ampiarahina fanampiny miaraka amin'ny alokaloka pastel. Ireo volom-borona, lakolosy ary pompom mavokely dia manampy mahavariana. Afaka manolo sary na haingon-trano rindrina hafa ny mpanonofy nofinofy, manome endrika tsy mahazatra.
Ny mpanentana nofy dia natao am-pitandremana ny voay mihantona eo am-bozongo. Ny manontolo dia voaravaka amin'ny tadiny, tadivavarana, bokotra ary pompom na tsipìka.
Dreamcatcher dia ny fiovantsika amin'ny lohahevitry ny talisman Indiana iray izay ahafahanao manonofy ihany. Ny saka dia hiasa tsara amin'ny tranon-jaza na amin'ny zokin'ny zaza efa lehibe. Izany ihany koa dia haingo mahafinaritra ho an'ny efitrano fatorian'ny ray aman-dreny, izay ahafahanao miala voly amin'ny zava-tsarotra amin'ny andro, hampiato ny nofinofy ratsy rehetra. Hevitra tsara ho an'ny ravaka na fanomezana tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa.
Ny mpihaza nofinofy vita amin'ny tanana dia miseho amina dika tokana, ary ny modely modely dia hita eo amin'ny sary.
Havantsongo Hoop: 22 cm.
Miala tsiny, tsy voavidy amin'izao fotoana izao